सबैप्रकारका इन्धनको मूल्य बढ्यो, नयाँ भाउ कति ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सबैप्रकारका इन्धनको मूल्य बढ्यो, नयाँ भाउ कति ?
नेपालमा सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी नयाँ भाउ कायम गरेको छ ।
नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ ३-३ रूपैयाँले बढेर क्रमशः १३३ रूपैयाँ, ११६ रूपैयाँ र ११६ रूपैयाँ कायम भएको छ ।
यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य १० रूपैयाँले बढ्दा एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ५० रूपैयाँले बढेर १५०० रूपैयाँ पुगेको छ ।
नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशन चितवनमा गर्ने तय भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह जिल्लामा चार दिन बिताए । उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने माडी र भरतपुरका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए । जनताको घर दैलो पनि गर्न भ्याए ।